Ronald Koeman oo ka hadlay khilaafka la sheegay inuu kala dhexeeyo Lionel Messi – Gool FM
Ronald Koeman oo ka hadlay khilaafka la sheegay inuu kala dhexeeyo Lionel Messi
(Barcelona) 16 Sebt 2020. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa xaqiijiyay in xiriirka isaga iyo Lionel Messi uu aad u wanaagsanaa, wuxuuna muujiyay in dhibaatada laacibku ay ka taagneyd maamulka isla markaana aysan isagu aheyn.
Magaca Lionel Messi ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo safka Barcelona xagaagan, maadaama uu ku wargeliyay maamulka kooxda inuu ka tagayo Barca xagaagan.
Si kastaba ha noqotee, xiisadda ayaa ugu dambeyntii dhamaatay, kaddib markii uu Lionel Messi go’aansaday inuu iska sii joogo garoonka Camp Nou xilli ciyaareedka cusub, xilli qandaraaskii Barcelona uu dhacayo xagaaga 2021.
Haddaba Ronald Koeman ayaa wareysi uu ku bixiyay “Fox Sports” waxaa wax laga weydiiyay xiriirka isaga iyo Lionel Messi, wuxuuna yiri:
“Xiriirka naga dhexeeya aniga iyo Messi hubaal aad ayuu u wanaagsan yahay”.
“Wuxuu ahaa loolan u dhexeeyey Messi iyo maamulka kooxda”.
“Waxaan la hadlay Messi tan iyo markaas, waxaana ku sii socon doonaa sidii caadiga ahayd”.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska uu Lionel Messi kula jiro kooxdiisa Barcelona uu dhici doono xagaaga sanadka soo socda ee 2021.
“Rajada ku guuleysiga Ballon d'Or wali wey jirtaa” – Robert Lewandowski
Kaddib heshiiskii cusbaa oo uu saxiixay Aubameyang, waa kuwee 10-ka ciyaaryahan ee ugu mushaharka badan Kooxda Arsenal?